Dhaqan gelinta go’aankii baarlamaanka ee shirkadda DP World oo sugaya saxiixa madaxwaynaha – Radio Daljir
Dhaqan gelinta go’aankii baarlamaanka ee shirkadda DP World oo sugaya saxiixa madaxwaynaha
Maarso 26, 2018 4:32 b 0
Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda faderaalka Soomaaliya Maryama Qaasim ayaa ka hadashay go’aankii uu baarlamaanka ka qaatay shirkadda DP World ee heshiiska la gashay maamulka Somaliland.
Wasiirka ayaa sheegtay go’aanka baarlamaanka uu ku mamnuucay heshiiskan inuu sugayo saxiixa madaxwaynaha dowladda faderaalka Soomaaliya, si’uu u dhaqan galo.
“Tallaabada aan qaadnay shacabka Soomaaliyeed iyo Caalamkuba waa la socdaan, Raiisul Wasaarahuna si cad ayuu u soo bandhigay, balse haatan waxa la sugayo ayaa ah in howsha rasmiga ah ee dhinaca Baarlamaanka jirta markii ay soo gaba gaboowdo loo gudbiyo Madaxweynaha, kaddibna uu dhaqan geliyo go’aanka labada Aqal ee Baarlamaanka.” ayey tiri Wasiir Maryan Aweys Jaamac.
Heshiis sadex geesood ah oo ay ku kala saxiixdeen magaalada Dubai ee dalka Isutagga Imaaraatka Carabta ayaa waxaa lagu heshiiyay shirkadda DP World inay maamusho dekedda Berbera, waxaana heshiiskaasi sidoo kale qayb ka ah dowladda Itoobiya.
Amiirka Qatar oo Ruushka kala hadlaya qalalaasaha Suuriya
Xiisadda Mowshinka Baarlamaanka oo sii xoogaystay